‘अनुराग’ हाउसफुल, टिकट नपाएपछि हलमै दर्शकहरुको नाराबाजी | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
‘अनुराग’ हाउसफुल, टिकट नपाएपछि हलमै दर्शकहरुको नाराबाजी
काठमाडौं, १३ असोज । पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको नपाली कथानक चलचित्र ‘अनुराग’ हिजोदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको छ । तर, प्रदर्शनको दोस्रो दिन आज शनिबार अनुरागले आक्रमक व्यापार गरेको छ । काठमाडौंका गोपीकृष्ण हल र अष्टनारायण हलमा अनुरागको टिकट नपाएपछि दर्शकहरुले हुलदुंगा मच्चाएका छन् ।
हलमा अनुरागको नाराबाजी लागेको छ । टिकट काउन्टर अघि पत्रकार धमला पुग्दा दर्शकले जनता जान्न चाहन्छन ऋषिजी खोई अनुरागको टिकट भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । अनुराग हेर्न दर्शकको घुईँचो लागेपछि धमला खुशी छन् । उनले भने,‘म हलमा पुग्दा एकछिन नाराबाजी नै लाग्यो । उहाँहरुले जनता अनुराग हेर्न चाहन्छन्, तर खोई टिकट ? टिकट छैन त भन्दै नारा लगाएका थिए ।’
गोपीकृष्ण र अष्टनारायणमा विहान र अहिले अपरान्ह दुवै शो हाउसफुल भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।